DAAWO Muuqaal: Xildhibaanada Isbedal doonka oo kulan Balaaran ku qabtay Muqdisho iyo Qorshahooda Khudbadihii ee jeediyeen!! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO DAAWO Muuqaal: Xildhibaanada Isbedal doonka oo kulan Balaaran ku qabtay Muqdisho iyo Qorshahooda Khudbadihii ee jeediyeen!!
DAAWO Muuqaal: Xildhibaanada Isbedal doonka oo kulan Balaaran ku qabtay Muqdisho iyo Qorshahooda Khudbadihii ee jeediyeen!!
Madaxweyne Xasan Xildhibaanadii Xilka Ka xayuubin lahayd oo Muqdisho iskuugu yimaaday kulan wadareed uu ka naxay Xasan Sh.
Waxaa magaalada Muqdisho kulan Balaadhan ku yeeshay 170 Xildhibaan oo Isbedel Doonka ah Soomaaliya, Qaarkood hadallo ay ka jeediyeen kulanka ayay ka sheegay in ujeedkoodu yahay inay beeniyaan in dowlado shisheeye ay saameyn ku yeeshaan Doorashada.
Waxaa ka dhex muuqda xildhibaano ay ka mid yihiin C/risaaq Jurrille, Axmed Macalim Faqi, Xuseen Carab Ciise, Foosiya Yuusuf X, Aadam, Cabdilaahi Goodax Barre iyo xubno kale, Waxaana Tirada xildhibaanada goobta ku sugan lagu sheegay inay gaadhayaan 170.
Xildhibaan Axmed Faqi ayaa sheegay in kacdoon cusub uu bilowday kaasoo looga hortegayo musuqmaasuqa iyo maamula xumida baahday, ayna maalinta doorashada la arki doono Awoodda xildhibaanada labada Aqal ee ku bahooway Isbadal doonka.
Previous PostDibed bax weyn oo saaka ka socda Muqdisho iyo Masuuliyiin ka tirsan dowlada oo ka qeyb galaya!! Next PostKHUDBADDA Maanta MUSHARAX MADAXWEYNE SAKARIYE MAXAMUUD XAAJI CABDI !!